လူသားအားလုံးအတွက်: May 2010
Irregular Cycle ရာသီ မမှန်ခြင်း
Dr. တင့်ဆွေ ထံမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
ငမောင်တို့လူမျိုးက ခွေးမွေးလေ့ ရှိပေမယ့် ခွေးချစ်တတ်တယ်လို့ ပြောဖြစ်လောက်တဲ့ အလေ့မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခုအခါ ခွေးချစ်တတ်တယ်ဆိုသူ၊ ခွေးကို တန်ဖိုးကြီးပေးဝယ်ပြီး တခုတ်တရ ယုယပိုက်ထွေး မွေးကြတာတော့ ရှိသပေါ့။ အနို့ပေမယ့် ဒါဟာ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝသူတွေရဲ့ ဓနဂုဏ်ပြ ခွေးပကာသန ခွေးဂုဏ်တည်တဲ့ ကိစ္စလို့ ငမောင်ကဆိုချင်ပါတယ်။ ဥစ္စာဓန ပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတအဖြစ် ခွေးပြိုင်၊ ခွေးအချစ်ပြိုင်ကြတာပါ။ ဒါလောက်နဲ့တော့ မြန်မာလူမျိုးဟာ ခွေးချစ်တတ်တဲ့လူမျိုးလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ မချစ်တတ်ရုံမျှမက ခွေးကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထဲမှာ အနိမ့်ကျဆုံး၊ အယုတ်အညံ့ဆုံးလို့ အယူအဆရှိကြ ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို ခွေးနဲ့နှိုင်းလျှင် မခံချိအောင်နာတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ မစင်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားတာ ခွေးပါပဲ။ ဆရာကြီး ဇင်အောင်ကတော့ ခွေးထောပတ်လို့ တစ်ခါက ရှုမဝမဂ္ဂဇင်းပါ ခွေး ဝတ္ထုမှာရေးသဗျ။ မစားနိုင်ဦးတော့ နမ်းရှူလိုက်ရမှတဲ့။ နို့မို့ဆို ခွေးခေါင်း ကိုက်သတဲ့။ ငမောင် မင်းဟာလေ ရုပ်ကသာမလှတယ်။ ညစ်တီးညစ်ပတ် ရွံစရာလဲ ပြောတတ်သေးဆို သော်ပေါ့။ အဲသဟာ ငမောင့်မူရင်း အော်ရီဂျင်နယ်မဟုတ်ရပါဘူး။ ငမောင်က Retold လုပ်တာပါ။ မူရင်းက ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ ဗုဒ် လေးဗုဒ်အဝင်ပါ ဖြစ်တော်မူတဲ့ ဆရာတော် ဦးဗုဒ်ရေးတဲ့ ခွေးကျင့်လင်္ကာပါနော။ ဖဲကတ္တီပါနဲ့ ဆိုဖာထက် စက်တော်ခေါ် သိန်းထောင်ကျော် တန်ကားကြီးစီးတဲ့ခွေး၊ အမည်းသားနဲ့ ဘီစကစ်ကျွေးရတဲ့ ခွေးဘူဇွာတွေကို ဆရာတော် ဦးဗုဒ်ရေးတာ မှန်၏၊ မမှန်၏ စမ်းသပ်ကြည့်ရလျှင် ဘယ်လို အဖြေထွက်မယ်မသိ။
မြန်မာစာပေမှာ ခွေးဂုဏ်ပုဒ် ထုတ်ဖော်ရေးတဲ့စာတွေလဲရှိပါတယ်။ လူကတောင် ခွေးဆီက ပြန်အတု ယူရမယ့် အင်္ဂါခြောက်တန်ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးအချက် ကတော့ သခင်ချမ်းသာ အရာမြင့်တာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆင်းရဲ နိမ့်ကျတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွေးက သခင်ကို မစွန့်ခွာ သစ္စာရှိတာပဲတဲ့။ ဟုတ်ပါ့။ ခွေးလောက်မှ သစ္စာမရှိသူတွေ ဒီလောက ဒွန္နယာကြီးမှာ တင်းကြမ်းပြည့်လို့။ ကုလားထိုင်ပေါ်ရှိစဉ်က မောင်မောင်၊ ဘဘ။ ဒါကလေးမှ လက်ဆောင် တော်သဂါရဝမပြုလိုက်ရလျှင် ကျွန်တော့်ဘဝ လူဖြစ်ရကျိုး မနပ်လှတာကြောင့် သေရတာကမှ ကောင်းပါလိမ့်၊ စိမ့်စိမ့်ချွဲပလီတတ်သူက ဟိုဟာ ကြီးပင်စင်တဲ့ အသံကြားတာနဲ့ အလကားဟာကြီး။ မသဒ္ဓါရေစာတွေ တီးပြီး ဝဖီးနေတာ။ ဘာဘာညာညာနဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော် ကလော်တုတ် ပါရော။ ဒီလိုလူမျိုးကို ခွေးကျင့် ခွေး ကြံလို့ ပြောလျှင် မှားသပေါ့။ ခွေးသိက္ခာကျတယ်ပေါ့နော်။
Posted by မိုးယံ at 10:35 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Gmail မှ GSM သို့ mail ပို့ခြင်း..
ခေတ်မှီတိုးတက်လျက်ရှိသောယနေ့ခေတ်တွင် Email ဆက်သွယ်မှုသည်လွန်စွာအရေးပါလျက်ရှိရာ Gmail နှင့် အခြား Office mail များမှ GSM phone များသို့ SMS စနစ်ဖြင့် Message ပို့နိုင်မည့်စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ GSM phone မှလည်း email သို့ အပြန်အလှန်ပို့ဆောင်နိုင်သော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ Mail Filter ပြုလုပ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ Gmail နှင့် Office Mail များကို Internet Access အသုံးပြုစရာမလိုပဲ လူကြီးမင်းတို့၏ Mobile phone များမှ Mail များကိုစစ်ဆေးနိုင်မည့် Email Alert စနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Email2 SMS အသုံးပြုရာတွင် Email မှ GSM သို့ SMS တစ်စောင်ကို ကျပ် ၁၀၀ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး GSM မှ Email သို့ SMS ပို့ရာတွင် ကျပ် ၁၀၀ ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) Email မှ GSMဖုန်းသို့ Message ပို့ရန် Email ပို့မည့်သူသည် Member ဖြစ်ရပါမည်။
(၂) မိမိ၏Email မှ To နေရာတွင် email2sms@etmsms.com ကိုရိုက်ပါ။
(၄) Message Box တွင် မိမိရိုက်လိုသော စာများအား ရိုက်ထည့်ပါ။ တစ်ကြိမ်
လျှင် စာလုံးရေ (၁၆ဝ) လက်ခံပါသည်။ ¤င်းထက်ကျော်လွန်သွားပါက
နောက်တိုး Message ၂, ၃, . . .စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်သွားမည်။ (ပုံ ၄-၁)
မှတ်ချက် ။ ။ နိုင်ငံခြား ဖုန်းနံပါတ်ရှေ့တွင် ( + ) ထည့်ပေးရန်။ မိမိပို့ချင်သော ဖုန်းနံပါတ်များကို ( , ) ခံပြီးရိုက်ရန်။
Posted by မိုးယံ at 10:32 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ လမ်းသလားနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်မခံပါနဲ့..။
ချစ်ခင်သူတွေ အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါတိုင်း အတင်းပြေးပြီး နှုတ်ဆက်စမ်းလိုက်ပါ..။
ဆိုတာကို သိလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်
ကိုယ့်စည်းကို တစ်ယောက်ယောက်က ကျော်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကျော်နေတဲ့ အကြောင်းကို
ပြေးပါ ၊ ခုန်ပါ ၊ နေ့တိုင်းကစားပါ...၊
စားတဲ့အခါ အားရပါးရ နဲ့ မြိန်ရည်ယှက်ရည် စားလိုက်စမ်းပါ..။
ကိုယ်လိုချင်တာ မြှုပ်ထားမှန်းသိရင် ဘယ်လောက်နက်နက် ယက်ပြီးဖော်ပါ..။
တစ်ယောက်ယောက် စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရင် တိတ်တိတ်လေးနေ ၊
အနားမှာထိုင်လို့ ညင်ညင်သာသာလေး ထွေးပွေ့ပေးပါ..။
တစ်ချက်လောက်ဟောင် ရုံနဲ့ ပြီးမယ်ဆိုရင် ကိုက်မနေပါနဲ့တော့...။
ဘယ်လောက်ပဲ ခဏခဏ အဝေဖန်ခဲနေရ ၊ အပြစ်တင်ခံနေရ ခံရ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
အပြစ်ရှိတယ်လို့ တစ်စက်လေးမှ မခံစားပါနဲ့..။ မျက်နှာ မပျက်ပါစေနဲ့..။
အဲဒီလို အချိန်မှာ လာလမ်းအတိုင်း အမြန်ဆုံးလှည့်ပြေးပြီး မိတ်ဆွေသစ်တွေ
Posted by မိုးယံ at 10:22 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သီရိမင်္ဂလာဈေး နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရမည်ဟု တရားဝင် ကြေညာ
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါဈေးကြီးရှိ ဈေးဆိုင်များ နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်သွားမည့် အကြောင်းကို ဈေးသူဈေးသားများနှင့် ဈေးမိဈေးဖများအား တရားဝင်စတင်အသိပေးကြေ ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ယင်းသို့ အသိပေးကြေညာခဲ့ခြင်းနှင့် အတူ ဈေးသစ် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း နှင့် ဈေးသစ်ရှိ ဆိုင်ခန်းများအတွက် ငွေကြေးထပ်မံ ပေးအပ်ရန် မလိုအပ်သည့်အပြင် အခွန်အခနှုန်းထားများကိုလည်း လက်ရှိဈေးတွင် ကောက်ခံနေသည့်အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အသိပေးကြေညာခဲ့သည်ဟု တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
Posted by မိုးယံ at 1:30 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
2010 Word Cup Timetable
Posted by မိုးယံ at 5:07 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Ning ဆိုဒ်များနှင့် မြန်မာ ဆိုဒ်များ ၀င်မရသော မြန်မာအဖွဲ့ဝင်များအတွက် လမ်းညွှန်
ကျွန်တော် တို့ Ning Platform မှာရှိနေတဲ့
ဆိုဒ်တွေအပြင် မြန်မာ Blog တော်တော်များများကို
မြန်မာပြည် မှ အင်တာနက် IP Poxy ကြောင့်
ပထမစာတွင် Ip Pass Software ဖြင့်
Server မှ ထိန်း၍ ၀င်ရောက်ရန်ပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်
ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ Admin ကို ညီညီလွင် @ Du Du (Hardware Designer) မှ
ပေးပို့တဲ့ Procedure ဖြင့်
Block ဖြစ်နေသော ဆိုဒ်များ ကို ပြည်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်
Ip Address များ ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ
သေချာ ဆောင်ရွက်ပါက ပြန်လည်ဝင်ရောက်၍ ရနိုင်ပါပြီခင်ဗျား
1. Firefox မှ .... Tool ဆိုသော နေရာတွက်ကလစ်ပါ
2. ကျလာသော ဘောက်မှ Option ကိုရွေးပါ
3. Option နှိပ်၍ ပေါ်လာမည့် ဘောက်ထဲတွင် Advance နေရာမှNetwork Tab တွင် Setting ကို ကလစ်ပါ
4. Setting ကို နှပ်၍ ကျလာမည့် ဘောက်တွင်
Manual proxy configuration နေရာတွင် ရွေးချယ်ပေးပါ
5. ထို့နောက် HTTP proxy နေရာတွင်
( 212.93.193.88 ) ဟုရိုက်ထည့်ပြီး - Port နေရာတွင် ( 443 ) ကို ရိုက်ထည့်ပါ
ပြီးလျှင် ( OK ) ကလစ်ပြီး ရပါပြီ ။
အထက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးပါက သင်သွားလိုသော
Ning များသာမက Blocked လုပ်ထားသော ဆိုဒ်များအားလုံး သင်ရောက်လေ့လာ၍ရပါပြီ
မှတ်ချက်။ ။ဧဒင်ဥယဉ် မှတဆင့်ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by မိုးယံ at 9:38 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ငွေအလိမ်မခံရဖို့ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက်
ငွေအလိမ်မခံရဖို့ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက်လေးတစ်ခုပြောပြချင်လို့ပါ၊
အခုခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားငွေကြေးနဲ့ မြန်မာငွေကြေးလဲလှယ်မှုများ
မြင့်မားလာနေသည်နှင့် အမျှ နိုင်ငံတကာသုံးငွေတွေ တရားမဝင်လဲလှယ်ကြတာက
အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ မတွေးထင်ကြတော့ပါဘူး၊ တစ်ဒေါ်လာကို ခြောက်ကျပ်နဲ့ ဘယ်သူမှ
တရားဝင်မလဲလှယ်ကြပါဘူး၊ အရပ်သားအချင်းချင်းလက်တို့စနစ်နဲ့ လဲလှယ်နေကြတာ
ဆယ်စုနှစ်ချီနေပါပြီ၊ ဒါကလည်း ခေတ်ရေစီးရဲ့လိုအပ်ချက် ဖြစ်နေလို့ပါ၊
တစ်ဒေါ်လာကို ပေါက်ဈေးဘယ်လောက်ဆိုပြီး ရောင်းသူဝယ်သူအချင်းချင်း ဒေါ်လာပေးကြ
မြန်မာငွေပေးကြ နဲ အရောင်းအဝယ်လုပ်ကြရာမှာ မြန်မာငွေကြေးကို လိမ်ကြတာပါ၊ ၊
ကြားဖူးနေတဲ့ တို့ဆေးဘာဆေးကိစ္စတွေနဲ့ လိမ်တာမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး၊
အခုလိမ်နည်းက ငွေကြေးရေတွက်ပုံကို အသုံးချပြီး ရိုးရိုးလေးနဲ့ကို လိမ်တာပါ၊ အသိ
အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်မြို့ထဲမှာ ဒေါ်လာကို မြန်မာငွေနဲ့သွားအလဲမှာ
ခံလိုက်ရတာပါ၊ အိမ်ရောက်မှ ရလာတဲ့မြန်မာငွေ တစ်သိန်းတစ်အုပ်စီမှာ
၂၇၀၀၀ကျပ်စီလျော့နေတာပါ၊ အရောင်းအဝယ် လုပ်နေတုန်း ကလည်းရေလာပါတယ်၊
တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ တဖက်လူက ရဲလာတော့မယ် မြန်မြန်လုပ်ပါ လို့ ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ကြားက
အလောတကြီးရေလာရတာပါ၊ စာဖတ်သူက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်၊ဒါပေမဲ့
ခံရတဲ့သူက တကယ်ခံလာရတာပါ၊ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေမှာ တကယ်သတိထားစရာကိစ္စပါ၊
အရွက်တစ်ရာကို တစ်အုပ်လုပ်စည်းကြသလို ၊ထောင်တန်ဆယ်ရွက်ပါ သောင်းအုပ် ဆယ်အုပ်
သောင်းအုပ်ဆယ်အုပ်ပါတဲ့ တစ်သိန်းအုပ်ကို ရေတွက်ရင် သရေပင်အစည်း မဖြေဘဲအရင်ဆုံး
သောင်းအုပ်ဆယ်အုပ်ပြည့်လားအရင် ရွေတယ်၊ ပြီးမှ အတွင်းက
ထောင်တန်လေးတွေကိုရွေမယ်၊ တစ်ရွက် နှစ်ရွက် သုံး လေး……. ရှစ်ရွက်
ကိုးရွက်ပြီးရင် တစ်အုပ်၊ နောက်ထပ်ကိုးရွက်ပြီးရင်တစ်အုပ်၊
ဒါမျိုးရွေတွက်ကြတာပါ၊ကိုးရွက်နဲ့ ဆုံးရင်ပြီးတာဘဲ၊ ပြည့်တယ်ပေါ့၊
အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကြောင့် အလိမ်ခံရတာပါ၊ (စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း အရင်က
အဲလိုမျိုးဘဲရေတွက်ပေမဲ့ ခုတော့ပြင်လိုက်ပါပြီ) အဲလိုမျိုးရေတွက်ရင်တော့
(၂၇၀၀၀)လျော့နေတဲ့ လိမ်ထားတဲ့ တစ်သိန်းအုပ်က သောင်းအုပ်ဆယ်အုပ်ပါမယ်၊
မြန်မာငွေတစ်ထောင်တန် ၇၃ရွက်(73000/ks)ထဲ နဲ့တစ်သိန်းအုပ်ပုံစံရအောင်
စီထားလို့ပါ၊ အပေါ်က ငွေရွေနည်းအတိုင်းမရွေဘဲနဲ့၊
အရွက်ကိုးဆယ်ပြည့်မပြည့်ရွေရင်တော့ အလိမ်ပေါ်မှာပါ၊ ထောင်တန်က
အရွက်ကိုးဆယ်မဟုတ်ဘဲ ခြောက်ဆယ့်သုံးရွက်ဘဲရှိနေလို့ပါ၊ ကိုးရွက်
အောက်ကငွေစီနည်းလေးဖတ်လိုက်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်
လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် ပိုမြင်သာသွားမှာပါ၊ စာရေးသူလည်း ထောင်တန် (၇၃)ရွက်နဲ့
တော်တော်လေး အချိန်ပေး အလုပ်ရှုပ်လိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့ နည်းလေးပါ
လိမ်နည်းသိနေ၍ အလိမ်မခံရစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်၊ လိမ်နည်းရေးထားသည်ဟု
Posted by မိုးယံ at 9:33 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
စနေ, 29 မေ 2010
ဘန်ကောက်မြို့လယ် စီးလုံ လမ်းမပေါ်က ဈေးသည်ဈေးဝယ်များကို တွေ့ရပုံ (မေလ ၂၉၊ ၂၀၁၀)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က လူအသေအပျောက် ဖြစ်တဲ့အထိ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့ ခရိုင်အတော်များများမှာ ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားတာကို ထိုင်းအစိုးရက ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီမို့ ညမထွက်ရအမိန့် ဆက်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိဂျာဂျီဝ က ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
အင်္ကျီနီဝတ် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ဘန်ကောက်က စီးပွားရေး အချက်အခြာနေရာကို နှစ်လကြာ သိမ်းပိုက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်မှာ စစ်တပ်က အင်အားသုံး နှိမ်နင်းဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ အကြမ်းဖက် ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်မှုတွေအတွင်း လူ ၈၈ ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင် ရှီနာဝဒ် ကို အကြမ်းဖက်မှု စွဲချက်တွေနဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ထိုင်းတရားရုံးတခုက ဖမ်းဆီးမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Interpol အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မစ္စတာတက်ဆင်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ပြန်ပို့ပေးဖို့ နှိုးဆော် တိုက်တွန်းချက် ထုတ်ပြန်ပေးရေး Interpol ကို တောင်းဆိုမယ်လို့ ထိုင်းအစိုးရက ပြောထားပါတယ်။
မစ္စတာတက်ဆင်ဟာ အာဏာသိမ်း ဖြုတ်ချခံရပြီးကတည်းက ပြည်ပမှာ နေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတော်များများမှာ ခိုလှုံ နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by မိုးယံ at 1:32 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အိုဇုန်းလွှာတွင်ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမူအရ အောင်ဆီဂျင်သုံးလုံးပါဝင်၍ မြေပြင်မှ ကီလိုမီတာ (၂၀) မှ (၄၀) အမြင့်တွင်တည်ရှိသည်။ သက်ရှိများအားအန္တာရယ်ကြီးမှားစေသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။ လူတို့အသုံးများသော ကာဗွန် ၊ ကလိုရင်း ၊ ဖလူအိုရင်းအက်တမ် များက ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်းထိုးဖောက်ပြီး ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု အရအိုဇုန်းဓာတ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး အိုဇုန်းကိုပျက်စီးလိုက်ကြသည်။ ပျက်စီးသွားသောအိုဇုန်းလွှာများကို ပြုပြင်၍မရတော့ သဖြင့် ပို၍မပျက်စီးအောင်ထိန်းသိန်းကြရသည်။အိုဇုန်းပျက်စီး ပျက်စီးစေသောအက်တမ်များထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားလာကြသည်။ လေထု တွင်လူတို့ထုတ်လွန်သောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များလာ၍ ကမ္ဘာကြီးသည် အရင်ကထက် ပို၍ပူနွေးလာသည်။ အိုဇုန်းလွှာ တစ်ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးတိုင်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတိုး လာသည်။ လေပွေလှိုင်းများကြောင့်လည်းအိုဇုန်းလွှာ ပျက်စီးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာရာသီဥတုလည်း ပြောင်းသွားနိုင်သည်။ သီးနှံအထွက်ကျဆင်းခြင်း ၊ရေခဲပြင်များအရည်ပျော်ခြင်း စသည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်သည်။အပင်များမှထုတ်လွတ်သော အောက်ဆီဂျင်များ အိုဇုန်းလွှာကို ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်း ပေးနေမှသာကမ္ဘာကြီးကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်။
ဖန်လုံအိမ်သည် အဆောက်အဦးကို အမိုးအကာအားလုံး ဖန်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ ပြင်ပနေ၏ အလင်းရောင်ကို ပိုမိုရရှိစေသည်။ ပြင်ပမှဝင်လာသော အပူဓာတ်ကို ပြန်မထွက် နိုင်ရန် ထိန်းထားနိုင်ရန်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းကို ဖန်လုံအာနိသင်ဟုခေါ်သည်။ ဟော်လန်နိုင်ငံတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပန်းမျိုးစုံစိုက်ပြီး ရောင်ချ၍ ချမ်းသာသောနိုင်ငံဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းခြုံသောလေထုတွင် နိုက်ထရိုဂျင်(ရ၈) ရာခိုင်နှုန်း ၊ အောက်ဆီဂျင် (၂၁) ရာခိုနှုန်း နှင့် အခြားသော ဓာတ်များအနည်းငယ်စီပါဝင်သည်။သို့သော် ထိုအနည်းငယ်သော ဓာတ်များသည် နေ၏အပူစွမ်းအင်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထိုထိန်းနိုင်သော သတ္တိကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေး၍ အပင်နှင့်သတ္တဝါများအသက်ရှင်နေနိုင်ကြသည်။ လေထုတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်ငွေ့အချို့သည်အပူဓာတ်ကိုစုပ်ယူထားနိုင်မူသည် ဖန်သားပြင်တွင်ပြုလုပ် ထားသော ဖန်လုံအိမ်၏ အာနိသင်နှင့်ဆင်တူသည်။သုတေသနပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာကြီး တဖြည်းဖြည်းပူနွောလာခြင်းကို ရည်ညွှန်း၍ ကမ္ဘာကြီးသည်
ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် တနေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုခံစား နေရသည်ကို သတိပြုမိခဲ့ကြသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတောမီးလောင်ခြင်း ၊ တောမီးရှို့ခြင်း နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းစက်ရုံသုံး လောင်စာများကြောင့်နှစ်စဉ်လေထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တန်သန်းတစ်ထောင်မှ နှစ်ထောင့်ငါးရာထိနှစ်စဉ် လွှင့်ပေးနေကြောင်းသိရသည်။ လေထုတွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် မတိုးပွားစေရန်လေထုမညစ်ညမ်းစေရန် လူသားတိုင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
Posted by မိုးယံ at 11:04 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တစ်ခါက ဆိုကရေးတီး၏ တပည့်တစ်ဦးသည် သူ့ထံသို့ ပြေးလာပြီး “ဆရာ
ထင်မှတ်မထားတဲ့ သတင်းတစ်ခု ပြောပြချင်တယ်” ဟူ ပျာပျာသလဲပြောသည်။
ဆိုကရေးတီးက “ ခဏနေဦး....အခုပြောမယ့် စကားကို ဆန်ကာသုံးခုနဲ့
စစ်ပြီးပြီလား” ဆိုကရေးတီး၏ ဆိုလိုချက်ကို သဘောမပေါက်သော တပည့်မှာ
ဆိုကရေးတီးက ဆက်၍ “တစ်ခြားလူကို မပြောခင် ဆန်ကာသုံးခုနဲ့
အရင်စစ်ရတယ်...ပထမ ဆန်ကာကို စစ်မှန်တဲ့ ဆန်ကာလို့ခေါ်တယ်။ ငါ့ကို ပြောမယ့်
“မှန်တယ် မမှန်ဘူးဆိုတာကို မသိရင် အဲဒီ သတင်းကို ဒုတိယဆန်ကာနဲ့
စစ်ကြည့်.... ငါ့ကိုပြောမယ့် သတင်းက အကောင်းလား”
“ဒီလိုဆိုရင် တတိယဆန်ကာနဲ့ ပြန်စစ်ကြည့်... ငါ့ကို အရမ်းပြောပြချင်နေတဲ့
သတင်းက အရေးကြီးတဲ့ သတင်း လား”
“အရေးမကြီးတဲ့ သတင်း နောက်ပြီး အကောင်းပြောမယ့် သတင်းလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး...
သတင်းမှန် ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလဲ မသိဘဲနဲ့ ဘာလို့
ပြောပြချင်ရတာလဲ... ပြောပြန်ရင်လဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် တာပဲ
အဖတ်တင်မယ်။ မဟုတ်မမှန်ပြောတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ စကားကို မယုံနဲ့
ဖြားယောင်းသွေးဆောင် သူတွေရဲ့ စကားတွေ နားထဲ မ၀င်စေနဲ့။ သူတို့ဟာ
စေတနာပါလို့ ပြောတာထက် သူတစ်ပါးကို ချောက်တွန်းဖို့က များတယ်။ အဲဒီလို
လူမျိုးနဲ့ပေါင်းရင် တစ်နေ့ကိုယ်လည်း ချောက်တွန်းခံရတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်
ကိုယ်ပြောမယ့် စကားကို ဆန်ကာသုံးခုနဲ့ အရင်စစ်ဆေးသင့်တယ်”
အတင်းဆိုတာ ထက်မြက်တဲ့ ဓားသွားထက် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ လူတစ်ယောက် ကို
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် မမြင်စေဘဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ တစ်ခြားလူ ထိခိုက်မှ ရလာမယ့်
ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို တစ်ချို့က နှစ်သက် တတ်ကြ တယ်။ စကားကို
လူတိုင်းပြောတတ် တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားကောင်း တွေကို လူတိုင်း
အရေးကြီးသောကိစ္စ စကားကို ဖြည်းဖြည်းပြောပါ။
ပြဿနာကြီးမားပါက စကားအား သေချာပြောပါ။
ပြဿနာသေးလျှင် စကားကို ဟာသနှော၍ပြောပါ။
မယုံကြည်ရသောကိစ္စ စကားကို ဆင်ခြင်ပြောပါ။
မဖြစ်ပွားသေးသောကိစ္စ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ မပြောပါနှင့်။
လူတစ်ဖက်သား ထိခိုက်စေသောစကား မပြောပါနှင့်။
ကိုယ့်ကိစ္စ တစ်ပါးသူ ဘယ်လိုပြောလဲ နားထောင်ပါ။
သက်ကြီးသူကိစ္စ များများနားထောင်ပြီး နည်းနည်းသာပြောပါ။
original post from : http://www.youthwant.com.tw
Posted by မိုးယံ at 11:01 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဘန်ကောက်အာဆီယံပွဲအတွက် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခံရပြန်တဲ့ ရေဗက္ကဝင်း
မိုးတွင်း ကာလမှာ ပြည်ပခရီးတွေ ထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ရေဗက္ကဝင်းက ... ဇွန်လ ၁၁
ရက်နေ့မှာ စင်ကာပူ သွားမယ်။ ဘာသာရေး ဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ခုပါပဲ၊ အဲဒါပြီးတော့
၁၅ ရက်နေ့ကို ဘန်ကောက်မှာ အာဆီယံပွဲ သွားဖို့ရှိတယ်။ နောက် စက်တင်ဘာလ
ထဲမှာလည်း နိုင်ငံခြား ထပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဘာသာရေး ဖျော်ဖြေပွဲက ရေဗက္က၊
ဆုန်သင်းပါရ်၊ စံပီး တို့နဲ့ပါ။ ရိုးရိုးရှိုးတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းရှိုးကို
ဆိုရတာ ကွာခြားမှုရှိတယ်။ ရေဗက္ကက ဘုရားကျောင်းရှိုးကို သိပ်ဆိုလေ့ဆိုထ
မရှိဘူး။ ဓမ္မ တေးသီချင်း တွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဓမ္မ
တေးသီချင်း အားလုံးကို အလွတ်မရဘူး။ အပြင် သီချင်းတွေက အမြဲတမ်း ဆိုနေတဲ့
အခါကျတော့ အလွတ် ရတာပေါ့။ ဓမ္မ တေးသီချင်း ဆိုတဲ့အခါ စာသား မှားတာတို့၊
လွဲချော်မှု တစ်ခုခု ဖြစ်မှာကို အရမ်း စိုးရိမ်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ပွဲကတော့ ၃၊ ၄
ရက်ပါပဲ။ အာဆီယံ ပွဲကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အနေနဲ့ တက်ရမှာပါ။
သီချင်း ဆိုရမှာပါ။ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံအပြင် ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဟောင်ကောင်
အဲ့ဒီ သုံးနိုင်ငံပါ ပါမယ်။ တစ်နိုင်ငံ တစ်ယောက် အဆိုတော် တွေချည်းပဲ
ဖိတ်ထားတာပါ။ ဆိုရမှာက မြန်မာ သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ အင်္ဂလိပ် သီချင်းတစ်ပုဒ်
ဆိုရမယ်။ မြန်မာ သီချင်းကတော့ “ငါတော့ မှားပြီ” သီချင်းဆိုမယ်။ အင်္ဂလိပ်
သီချင်းကတော့ ရေဗက္က သေချာ မရွေးရ သေးပါဘူး။ “ငါတော့ မှားပြီ” သီချင်းက
အကတွေနဲ့ ဆိုမှာဆိုတော့ ဟိုရောက်ရင် အကတွေ တိုက်ရဦးမယ်။ ဒါပေမယ့်
မြန်မာသီချင်းက ဆိုနေကျဆိုတော့ သိပ်ပြင်ဆင်စရာ မလိုပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်
သီချင်းကတော့ ကြိုပြင်ဆင်သွားမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူများနိုင်ငံက
အဆိုတော်တွေလည်း လာမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘက်က လွဲချော်မှုမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး။
အာဆီယံအတွက် ဖိတ်ခံရတာ ဒီတစ်ခါနဲ့ဆို ၂ ခါရှိပါပြီ။ ပထမ အကြိမ်က ဗီယက်နမ်
သွားရတာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက Miss ပြိုင်သလိုမျိုး အာဆီယံ အလှမယ် ပုံစံမျိုး
သွားရတာပေါ့။ အခုက အဆိုတော် အနေနဲ့ သွားရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုတစ်ခေါက်
ပိုပြီးတော့ အားရပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း တာဝန်ကြီးတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံရဲ့
ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးနဲ့လည်း တွေ့ဖို့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့
ပြုမူပြောဆို နေထိုင်ပုံတွေက မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု နေတယ်ဆိုတော့
ပိုပြီး တာဝန်ကြီးတယ်။ Band နဲ့ Dancer ကတော့ ဟိုကအဖွဲ့တွေပါ။ သူတို့က
အစမ်းကျင့်ဖို့ကို ၃ ရက် အချိန်ပေး ထားတယ်။ ၁၀ ရက်လောက် ကြာမယ်။ ပွဲက
တစ်ရက်တည်းပါ” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Posted by မိုးယံ at 10:59 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Phillipine နိုင်ငံ Bohol island မှ ဘယ်နိုင်ငံမှာ မှ မရှိတဲ့ သဘာဝ အမွေအနှစ် တမူထူးခြားသော Chololate Hills ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်တူ ဂိုတ်တူ တောင်ကုန်းပေါင်း ၁၂၆၈ ကျော်ဟာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၅၀ ကျော် ဖြန်.ကျက်
နေရာယူထားပါတယ်။ တောင်ကုန်း များကို မြက်ပင်များက ဖုံးလွှမ်းထားသဖြင့်
စိမ်းစို နေကာ ခြောက်သွေ.သော ရာသီရောက်က အညိုရောင်သို.ပြောင်းလဲ
သွားသဖြင့် Chololate Hills ဟုအမည်ပေးခဲ့ကြသည်။
Chololate Hills သည် Phillipine ရဲ. ခရီးသွားဧည့်သည်များ ကို စွဲဆောင်စေတဲ့ သဘာဝ
နေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကုန်းများမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၁၀၀ မှ
၅၀၀(ပေ၃၃၀ မှ ၁၆၀၀) လောက် အမြင့် ရှိကြပါတယ်။
Santorini ဆိုတဲ့ သေးငယ်ပြီး ၀ိုင်းစက်နေတဲ့ မီးတောင်ဟောင်း ကျွန်းစုလေး ကတော့ ဂရိနိုင်ငံရဲ. အရှေ.တောင်ဘက် ၂၀၀ ကီလိုမီတာ အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ ကျွန်းစုအကျယ် ၇၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်အရ လူဦးရေ ၁၃၆၇၀
နေထိုင်ကြပါတယ်။ အရင်က ကျွန်းစုကြိး တခု အဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့
နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ က ကြီးမားတဲ့ မီးတောင် ပေါက်ကွဲမူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
ကျွန်းစု အစိတ်အပိုင်းလေး များထဲမှာ တခု အဖြစ် Santorini ကျွန်းစု ရယ်လို.
ပေါ်ပေါက်လာကာ ဥရောပတိုက်ရဲ. စွဲဆောင်မူတခုဖြစ်ပါတယ်။
Santorini ကျွန်းစု ဟာ ဂရိနိုင်ငံနှင့် ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှာ ပေါင်းစည်းခဲ့ပါတယ်။ သူ.၇ဲ.
အဓိက လုပ်ငန်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့် စပျစ်ဝိုင် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး
အများသောအားဖြင့် နွေရာသီ မှာ ခရီးသွားများလေ့ရှိပါတယ်။ Santorini တွင်
မြစ်၊ချောင်းများ မရှိသဖြင့် ရေအင်မတန်ရှားပါးပါတယ်။ ၁၉၉၀ ထိ ခေါင်မိုးမှ
ရေတိုင်ကီ ဖြင့် မိုးရေသာ အားကိုးနေခဲ့ကြပါတယ်။ မိုးမရွာ ခဲ့ရင်တော့
ဂရိနိုင်ငံ ရဲ နီးစပ်ရာ ဒေသတချို. မှ ရေတင်ပို.မူကို အားကိုးရပါတယ်။ ယခု
အခါမှာတော့ ဆားငန်ရေကို ရေချို အဖြစ် ထုတ်လုပ်ပေးသော စက်ရုံ ရှိလာ
သော်လည်း ရေပေးဝေရေး စနစ် က အိမ်တိုင်းသို. အလွယ်တကူ ရေ မထောက်ပံ့
Santorini ကိုလေယာဉ်ဖြင့်သွားမယ် ဆိုရင် အေသင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တဆင့် မိနစ် ၄၀ ကြာ
လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွား ရာသီဖြစ်တဲ့ နွေဦးရာသီမှာတော့
ဥရောပ နိုင်ငံ တော်တော်များများ မှ Santorini ကျွန်းဆီ သို.
တိုက်ရိုက်လေယာဉ် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အခြား အပန်းဖြေ ဇိမ်ခံသင်္ဘောများ၊
speed boat များဖြင့်လဲ Santorini ကို ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Georgia နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး၊အလှဆုံး Georgia Aquarium ငါးပြတိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေသတ္တ၀ါအမျိုးပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး သတ္တ၀ါ ၁ သိန်းကျော် မွေးမြူထားပါတယ်။ ထိုပြတိုက်အတွက် ရေ ဂါလံ ၈ သန်းခန်. သိုလောင်ထားရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုခီနာဝါ မှ Churaumi ငါးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဒုတိယ အကြီးဆုံး
ထိုပြတိုက်အတွက် ရေ ဂါလံ ၂ သန်းခန်. သိုလောင်ထားရပါတယ်။ အင်မတန်ရှားပါးသော
တောင်အာဖရိက မှ အကြီးဆုံး Ushaka Marine World ငါးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်လှပသော
ကစားကွင်းလည်းပါရှိပါတယ်။ သေးငယ်သော ရေနဂါးမှ စ၍ ငါးမန်း၊ လင်းပိုင် အထိ
အမျိုးအစား စုံလင်စွာ ပြသထားပါတယ်။ ထိုပြတိုက်အား ရှေးဆန်ဆန် ဒီဇိုင်း
Posted by မိုးယံ at 10:55 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဘာမှကို မကျန်တော့ပါလားနော်...အန်စေတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မလဲ အပါအ၀င်ပါ။ ဆဲမယ်ဆိုရင်လည်း ခံပါ့မယ်... အဟဲ...ဖြစ်တတ်တာလေးတွေပါ။ ၀မ်းနည်းတာတွေပဲ ရေးနေလို့လဲ မဖြစ်သေးဘူး။ တခါတလေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့။ ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ပါသည်။
Posted by မိုးယံ at 2:29 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အာဂျင်တီးနားအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားရလျှင် ၀တ်လစ်စလစ် ပြေးမည်ဟု မာရာဒိုနာ ပြော
၂၇ မေ ၂၀၁၀
အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်း၏ နည်းပြဖြစ်သူ ဂန္ထ၀င်ဘောလုံးသမားကြီး ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာက အာဂျင်တီးနားအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဆွတ်ခူးခဲ့လျှင် ဗျူနိုအေရီစ်မြို့လယ်ခေါင်တလျှောက် ၀တ်လစ်စလစ် ပြေးမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားလိုက်သည်။
ရေဒီယိုရှိုးတခုပြုလုပ်စဉ်အတွင်း အာဂျင်တီးနားနည်းပြ မာရာဒိုနာက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကြို နောက်ဆုံးခြေစမ်းကစားပွဲအဖြစ် တနင်္လာနေ့က ကနေဒါ လက်ရွေးစင်အသင်းကို (၅) ဂိုး - ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး နောက်တနေ့တွင် ခန့်မှန်းရခက်သည့် မာရာဒိုနာက ထိုသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဂျင်တီးနားအသင်းသည် တောင်အာဖရိက ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် အုပ်စု (ခ) ၌ ပါဝင်ပြီး ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့တွင် အာဖရိကအသင်းဖြစ်သည့် နိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းနှင့် အဖွင့်ပွဲစဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အုပ်စုတွင်း အခြားပြိုင်ဘက်များဖြစ်ကြသည့် ယူရို ၂၀၀၄ ချန်ပီယံ ဂရိ၊ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယားအသင်းတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
Posted by မိုးယံ at 1:17 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တောင်အာဖရိက ဟိုတယ်အလုပ်သမားများက ကိုလံဘီယာဘောလုံးအသင်းထံမှ ငွေကို ခိုးယူ
၂၈ မေ ၂၀၁၀
ဟိုတယ်အလုပ်သမားနှစ်ဦးသည် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင်အသင်းနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရန် ရောက်ရှိနေသည့် ကိုလံဘီယာဘောလုံးအသင်း ကစားသမားများထံမှ ငွေကို ခိုးယူခဲ့ကြောင်း ရဲက ပြောဆိုသည်။
သောကြာနေ့တွင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲအရာရှိ ယူဂျင်းအိုပါမန်က ပြောကြားရာ၌ ကိုလံဘီယာဘောလုံးသမားများ အင်္ဂါနေ့တွင် လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေစဉ်အတွင်း သူတို့တည်းခိုသည့် ဟိုတယ်အခန်းများအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်ကို ခံရကြောင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းပြီး ဟိုတယ်သို့ ပြန်အလာတွင် ငွေကြေးများ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ဟိုတယ်အလုပ်သမားနှစ်ဦးကို ကြာသပတေးနေ့တွင် ခိုးမှုစွပ်စွဲချက်များဖြင့် တရားရုံးထုတ်ခဲ့ကြောင်း အိုပါမန်က ပြောဆိုသည်။ တတိယတဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ခိုးမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း သိရပြီးနောက် နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ အမှုအခင်းသည် ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြို့မြောက်ပိုင်း ဆင်ခြေဖုံးရှိ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်တခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စလိုဗေးနီးယားအသင်းသည်လည်း ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်း အဆိုပါဟိုတယ်တွင် တည်းခိုရန် ရက်ချိတ်ထားပြီး ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကျင်းပခဲ့သည့် တိုက်ကြီးများဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းကလည်း အီဂျစ်အသင်းသည် ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ဟိုတယ်တခုတွင် ဒေါ်လာ (၂,၅၀၀) နီးပါး အခိုးခံခဲ့ရသည်။ တောင်အာဖရိကအသင်းသည် ကြာသပတေးနေ့က အဓိက ကမ္ဘာ့ဖလားကစားကွင်းဖြစ်သည့် ဆော်ကာစီးတီး၌ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသည့် ပထမပွဲစဉ်တွင် ကိုလံဘီယာအသင်းကို (၂) ဂိုး - (၁) ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Posted by မိုးယံ at 1:15 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Bits & Bytes အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၃)
ကွန်ပျူတာ အခေါ်အဝေါ်တွေထဲက Bits & Bytes မှာ Bits အကြောင်းကို ရှင်းပြ ခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒီတစ်ပတ်တော့ Bytes အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Bytes ဆိုတာ ၀င်ဆံ့မှုပမာဏကို တိုင်းတာတဲ့ ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ကွန်ပျူတာရဲ့ ကျပန်းမှတ်ဉာဏ် RAM နဲ့ Hard Disk တွေမှာ ၀င်ဆံ့မှုကို Bytes ယူနစ်နဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။
Bytes ဆိုတာ Binary လို့ခေါ်တဲ့ ဒွိကိန်းစဉ်စနစ်ကို အခြေခံထားပါတယ်။
ဒွိကိန်းစဉ်ဆိုတာကတော့ ကိန်းခြေအခြေ(၂)ရှိတဲ့ ရေတွက်မှု သင်္ချာစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bytes ဟာ ဒွိကိန်းစဉ်တွေကို ရေတွက်တယ်လို့ ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ရေတွက်သုံးစွဲနေတဲ့ သင်္ချာစနစ်က ကိန်းခြေအခြေ(၁၀)မှာ အခြေခံရေတွက်ပါတယ်။ ဒါကို ဆယ်လီစိတ်စနစ်လို့ သင်္ချာမှာ ခေါ်ပါတယ်။
ဆယ်လီစိတ်စနစ်မှာ ကိန်းဂဏန်း (Digit) သုညမှ ကိုး (0 to 9) ပါဝင်ပြီး ဒွိကိန်းစဉ် စနစ်မှာ သုညနဲ့ တစ် (0 and 1) သာ ပါဝင် ပါတယ်။
ဥပမာ - 1010 ဆိုပြီး ရေးသားပါတယ်။ ဒီ Binary code ပေါ် အခြေခံပြီး 'တစ်' ဖြစ်ရင် ON ၊ 'သုည' ဖြစ်ရင် တော့ OFF လို့ ယူဆကာ Electrical Signals တွေအဖြစ် မှတ်ယူကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာကို ခိုင်းစေရာမှာ ON & OFF စတဲ့ Electrical Singnals တွေနဲ့ Instruction Bus တွေကို ဖြတ်သန်းစေခြင်း အားဖြင့် ကွန်ပျူတာက အလုပ်လုပ်ပါတော့တယ်။
Bits and Bytes ဆက်နွှယ်မှု
Bits ဆိုတာကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ အခြေခံအကျဆုံးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Bits တွေဟာ တစ်ခုချင်းစီရပ်တည်နေပေမယ့် ရှစ်ခုစီ (8Bits Collection) စုပေါင်း ပါဝင်တယ်။ ရှစ်ခုစီစုပေါင်းထားတဲ့ အစုတစ်စုကို Bytes လို့ ခေါ်ပါတယ်။ 1 Bytes ဟာ 8Bits နဲ့ ညီတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ Bytes ဟာ ကွန်ပျူတာရဲ့ အချက်အလက်ဝင်ဆံ့မှု ရေတွက်ရာမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာရဲ့ အချက် အလက်ဝင်ဆံ့မှု ရေတွက် ရာမှာ 8 Bits = 1 Bytes ဖြစ်ပြီး 1024 Bytes ကို 1 Kilobyte လို့ခေါ်ပါ တယ်။ 1 Kilobyte မှာ 10 Bits ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သင်္ချာ ထပ်ညွှန်းကိန်းနဲ့ 210 လို့ဖော်ပြပါတယ်။ 210 ဟာ 1023 နဲ့ ညီပါတယ်။ သုညကနေ 1023 ရေတွက်တာမို့ 1024 Bytes လို့ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာမှာ ၀င်ဆံ့မှုတိုင်းတာတဲ့ စနစ်တွေကို လေ့လာနိုင်ဖို့ ၎င်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇယားလေးတစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ငလျင်ဒဏ်ခံမိခင်များ ကလေး ၂,၀၀၀ ကျော် မွေးဖွား
ပေကျင်း - ၂၀၀၈ ခုနှစ် ငလျင်ဒဏ်ကြီးကြောင့် သားသမီးများဆုံးရှုံးသွားသော တရုတ်ပြည်မှ အမျိုးသမီးများသည် ယခုအခါကလေး ငယ် ၂,၀၀၀ကျော်မွေးဖွားပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊သားသမီးရအောင် ဆေးထိုးပေးမှုလုပ်ငန်းများအပါအ၀င်အစိုးရ၏အစီအစဉ်ကိုကျေးဇူး တင်ကြကြောင်း အစိုးရမီဒီယာ က သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆေးဝါးအခမဲ့ကုသပေးသော ထို အစီအစဉ်အရ အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၃,၁၄၀ ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ အနက် အမျိုးသမီး ၂,၀၁၆ ဦး ကလေး မွေးဖွားခဲ့သည်ဟု အစိုးရ၏ စာရင်းဇယားများကို ကိုးကား၍ ဂလိုဘယ်တိုင်း(မ်) သတင်းစာက ဖော်ပြသည်။
တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ပြင်းအား ၈ ဒသမ သုညရှိ မြေငလျင်ကြီး လှုပ်ခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် မိသားစုများအားကလေးတစ်ယောက်သာ ယူခွင့်ပြုသည့်တင်းကျပ်သော လူဦးရေထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်း ထားသည်။ သို့ သော်လည်း စီချွမ်ငလျင်ဒုက္ခသည်များ အား ထိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များမှ လျှော့ ပေါ့ခွင့်ပေးထားသည်။ ငလျင်ကြောင့် ကလေးများဆုံးရှုံးသွားသော မိဘများနှင့် မိမိတို့ကလေးများ မသန်မစွမ်း ဖြစ်သွားသော မိဘများကို နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက် ယူခွင့်ပြုကြောင်း အစိုးရက ကြေညာသည်။
Posted by မိုးယံ at 1:08 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) အနေဖြင့် ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်း ပျမ်းမျှ (၁၅) လောင်းခန့်ကို လစဉ် သင်္ဂြိုဟ်ပေးနေရကြောင်း သိရသည်။
အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူက “ရဲက အကူအညီတောင်းမှ၊ အာမခံမှ၊ ထောက်ခံချက်ပေးမှ ကျနော်တုိ့ သင်္ဂြိုဟ်ပေးပါတယ်။ ဆေးရုံက ရောက်လာတာမှန်ပေမယ့် ရဲက အာမခံရပါတယ်။ ဆေးရုံက သေစာရင်းထုတ်ပေးတယ်။ တချို့ဖြစ်စဉ်တွေကျ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတွေက ပေးပါတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းကို PC (police case) ဟု သတ်မှတ်ကာ ရဲထောက်ခံမှုဖြင့်သာ သင်္ဂြိုဟ်ပေးပြီး သင်္ချိုင်းလက်မှတ် သီးခြားထုတ်ပေးမှုမရှိဟု သိရသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက “လမ်းဘေး သေတယ်။ ရ၀တ သက်သေနဲ့ ရဲက စစ်ဆေးတယ်။ ပြီးတော့ ဆေးရုံပို့တယ်။ ဆေးရုံက ရင်ခွဲပြီး ရဲက သေမှုသေခင်း (Police Case) ဖွင့်တယ်။ အလောင်းပိုင်ရှင် ပေါ်လာတဲ့အထိ ဆေးရုံက စောင့်ပေးပါတယ်။ ပိုင်ရှင် မပေါ်တော့ဘူးလို့ ဆေးရုံက ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ကျနော်တို့အသင်းကို အကူအညီတောင်းပါတယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
၎င်းက “မှတ်ပုံတင် မရှိတာရယ်၊ ယူဆောင်သွားလေ့ မရှိတာရယ်လည်း ပါတာပေါ့။ မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့သူတွေဆို ဥပမာ ပျံကျကျူးကျော်တဲတွေ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒီက လူတွေမှာ မှတ်ပုံတင် ကိုင်နိုင်သူ ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ။ နောက်ပြီး အိမ်မဲ့ရာမဲ့ အခြေအနေမဲ့တွေ ရှိသေးတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဖွားသေစာရင်းတို့၊ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ စာရင်းတို့ အတိအကျရှိနိုင်ပါ့မလား။ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေပဲ” ဟု ပြောဆိုသည်။
Posted by မိုးယံ at 1:05 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဘောလုံးအကယ်ဒမီ မေလတတိယပတ် ဖွင့်မည်
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မန္တလေးမြို့ရှိ ဘောလုံးအကယ်ဒမီကို မေလတတိယ ပတ်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အဆိုပါ ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးစိုးညွန့်က မြန်မာ တိုင်း(မ်)နှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ပြောသည်။
အဆိုပါ ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဘောလုံးကွင်း နှစ်ကွင်း၊ ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း တစ်ကွင်း၊ သဲသောင်ပြင် ဘောလုံးကွင်း တစ်ကွင်းစုစုပေါင်း ဘောလုံး ကွင်း လေးကွင်း ပါရှိသည်။
၁၅ ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွင် သုံးထပ်ဆောင် ပါရှိ ပြီး ဘောလုံးအသင်းသုံးသင်းစာ နေနိုင်သည့် အဆောင်၊ လူ ၁၂၀ စားသောက်နိုင်သည့် စားဖိုဆောင်၊ မီးဖိုခန်းတို့ပါ ရှိသည်။
နည်းပြများအတွက် အဆောင် သီးသန့်ပါရှိပြီး အထူးဧည့်သည်များ အတွက်လည်း သီးသန့်အခန်းထားရှိသည်။
ထို့ပြင် စာသင်ဆောင်၊ ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ဆောင်၊ အစည်းအဝေး ခန်းမစသည်တို့လည်းပါရှိသည်။
"ဒီအဆောက်အအုံကို ကနဦးက ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ရေမီး၊ landscaping ပိုင်းတွေကို Max ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူခဲ့ ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲ ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က သတ်မှတ်မယ့်ရက်ကို ပဲ ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ရက်နေ့လို့ပဲ ခန့်မှန်း ထားရတာပါပဲ"ဟု ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးစိုးညွန့်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ အတွက် ၁၁ နှစ်အောက် အယောက် ၃၀၊ ၁၃ နှစ်အောက် အယောက် ၃၀၊ ၁၅ နှစ်အောက် အယောက် ၃၀ ရွေးချယ်ထားပြီး ဖြစ်ကာ နိုင်ငံခြား နည်းပြချုပ်တစ်ဦး၊ မြန်မာနည်းပြ သုံးဦးတို့က တာဝန်ယူ သင်ကြားပေးမည့်အပြင် မြန်မာ့ ဘောလုံးလက် ရွေးစင်အဖြစ် မွေးထုတ်ရန် ရည်စူးဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဘောလုံးအကယ်ဒမီသည် မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းတောင်ဘက်၌ တည်ရှိသည်။
Posted by မိုးယံ at 1:02 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
﻿ မငြိမ်မသက်မှုများအပြီး ထိုင်းမြို့တော်ဘန်ကောက် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် လည်ပတ်၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာဖျူးအမိန့်တစ်ပတ်ကြာ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ထားဖွယ်ရှိ PDF
ဘန်ကောက်လမ်းများတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည့် မြူနီစပယ်လုပ်သားများ
ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်တပ်က ရှပ်နီများအပေါ် အင်အားသုံးနှိမ်နင်းအပြီးတွင် မေ ၂၄ ရက်၌ ဘန်ကောက်မြို့သည် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်ဟု သိရသည်။ ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြည်သူများသည်လည်း အပျက်အစီးများ ရှင်းလင်းထားသော လမ်းများပေါ်တွင် ပြန်လည်သွားလာ လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သည်။
လူဦးရေ ၁၀ သန်းခန့်ရှိသော ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ အလျင်အမြန်ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း ဘန်ကောက်အပါအ၀င် အခြားပြည်နယ် ၂၃ ခုတွင် ကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားမှုကို လာမည့် သီတင်းပတ်အထိ တိုးမြှင့်ထုတ်ပြန် ရန် အာဏာပိုင်များက အစိုးရထံ အကြံပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှပ်နီများအပေါ် စစ်အင်အား သုံးနှိမ်နင်းခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၀န်ကြီးချုပ် အဘ်ဟီးဆစ်နှင့်အခြား ၀န်ကြီး ၅ ဦးအား ဝေဖန်ရှုတ်ချသည့်အဆိုကို တင်သွင်းရန် ရှပ်နီထောက်ခံသော အတိုက်အခံဥပဒေပြုအမတ်များက မေ ၂၄ ရက်တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သို့သော် ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်မည့်ရက်ကို မသတ်မှတ်ရသေးပေ။ လွှတ်တော်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်အဘ်ဟီးဆစ်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရက အမတ်နေရာအများစု ရရှိထားသည်။
ရှပ်နီများက သီတင်းပတ်ခြောက်ပတ်ခန့် နေရာယူစခန်းချထားသော ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဈေးဝယ်စည်ကားရာနေရာကိုလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မတ်လမှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် လူ ၈၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၁၉၀၀ နီးပါး ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည်။ ယင်းပဋိပက္ခအပြီးတွင် အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ လုပ်ငန်းရှင်များသည်လည်း ဆိုင်ရာနေရာသို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကာလအတွင်း အီတလီနိုင်ငံသား ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး အပါအ၀င် ပြည်ပသတင်းထောက် နှစ်ဦးလည်း သေဆုံးခဲ့သည်။
မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဈေးဝယ်ကုန်တိုက်ကြီး Central World နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီး Central World ကို ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ခန့် အာမခံထားထားကြောင်း ကုမ္ပဏီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် က ပြောကြားခဲ့သည်။
Central Group ၏ လက်လီလုပ်ငန်း Central Pattana သည် ဈေးဝယ် ကုန်တိုက်ကြီး ၁၅ ခု ကို လုပ်ကိုင်နေပြီး Central World သည် အကြီးဆုံး ကုန်တိုက်ဖြစ်သည်။ စတုရန်းပေ ၂ ဒသမ ၀၀၂ သန်း ကျယ်ဝန်းသော Central World သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ပင်မကုမ္ပဏီ၏ ၀င်ငွေ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။
ပိုကျသွားသည့် စင်ထရယ်ဝါးလ် ရှော့ပင်းမောလ်ရှေ့တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြသူများ
Posted by မိုးယံ at 10:48 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Apple iPad နှင့် အခြား ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ ထုပ်လုပ်ပေးသော Foxconn ၏ ဆန်ကျန်း (Shenzhen) ဒေသရှိ စက်ရုံအတွင်း မေလ ၂၆ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညက ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ထပ်မံ သတ်သေခဲ့ရာ ယခုနှစ်အတွင်း Foxconn စက်ရုံတွင် ဆက်တိုက် ဝန်ထမ်းသတ်သေမှုများ အနက် ၁၂ ဦးမြောက် အထိရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
ဆန်ကျန်း မြို့တော် ပြည့်သူ့လုံခြုံရေးဌာနက သေဆုံးသွားသော အမျိုးသားသည် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် လူလွတ်တစ်ဦးဖြစ်ကာ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း Gansu ဒေသမှဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သောနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့က ဤစက်ရုံသို့ အလုပ်ဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညပိုင်း ၁၁နာရီ ၂၀ ဝန်းကျင်တွင် သတင်းရရခြင်း Yousong ရဲစခန်းမှ ရဲများစက်ရုံသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ စက်ရုံရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောင်အမှတ် C2 ၏ (၇)ထပ်မြောက်မှ လူတစ်ဦး ခုန်ချလာသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
Foxconn ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ Terry Gou
Foxconn ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ Terry Gou က ကုမ္ပဏီ၏ စက်ရုံသည် ချွေးတပ်စခန်းကဲ့သို့ အလုပ်သမားများကို မဝရေစာ ပေး၍ခိုင်းသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဟူသော စွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဒီအခြေအနေကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ စကားနဲ့ ပြောရတာ မထိရောက် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြမှာပါ။ ကုမ္ပဏီက ချွေးတပ်စခန်းလို လုံးဝ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဝန်ထမ်း ၈ သိန်းကျော် ရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာတွေ အများကြီးပါဘဲ” ဟု Foxconn ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ Terry Gou က ပြောကြားပါသည်။
ယခုသေဆုံးခဲ့သော ဝန်ထမ်းသည် ဇန်နဝါရီလမှ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ သေကြောင်းကြံစည်မှု ၁၂ ခုအနက် ၁၀ ဦးမြောက် သေဆုံးသူဖြစ်သည်။ Foxconn စက်ရုံတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦးပေါ်မှာ ခုန်ချ၍ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည် ၁၂ ခုအနက် ဝန်ထမ်း ၂ ဦးမှာ အသက်မသေဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာသာ ရရှိခဲ့သည်။
Posted by မိုးယံ at 10:22 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သီရိမင်္ဂလာဈေး နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရမည်...
Ning ဆိုဒ်များနှင့် မြန်မာ ဆိုဒ်များ ၀င်မရသော မြန်...
ဘန်ကောက်အာဆီယံပွဲအတွက် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ထပ်မံဖိတ...
အာဂျင်တီးနားအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားရလျှင် ၀တ်လစ်စလစ် ပြေးမ...
တောင်အာဖရိက ဟိုတယ်အလုပ်သမားများက ကိုလံဘီယာဘောလုံးအ...
ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းများကို နာရေးကူညီမှုအသင်း သင်္ဂြို...
﻿ မငြိမ်မသက်မှုများအပြီး ထိုင်းမြို့တော်ဘန်ကောက် ပံ...
Apple iPad နှင့် အခြား ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ ထုပ်လု...
မင်္ဂလာဈေးကို ၂ လအတွင်းအပြီး ပြင်ဆင်မည်
ဝေဒနာများနေပါစေ စေတနာ မရှားပါစေနဲ့
﻿ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဆေးဝါးဖြန့်ချိမှု၏ ရာခို...
﻿ မြောက်ကိုရီးယား၏ ရန်စတိုက်ခိုက်မှုများ အတွက် အသင်...
အင်တာနက်လည်းသုံး ရုပ်သံလည်းကြည့်နိုင်သည့် တီဗွီပေါ်ပြီ
﻿ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် မုသားစကားဆိုတ...
ငွေကြေးခ၀ါချမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှောန်ကွန်နရီအား စစ...
﻿ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ပယ်နယ်တီကန်သွင်းမှုနှင့်ပတ...
Nissan မှ ဆီဖြည့်ရန် မလိုသည့် လျှပ်စစ်ကား Leaf ကို...
ရှပ်နီဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦး...
Web 2.0 ကုမ္ပဏီများ တရုတ် နိုင်ငံတွင် ရပ်တည်နိုင်ရန...
Slipknot အဖွဲ့မှ Bass ဂစ်တာသမားပေါလ်ဂရေး သေဆုံး
အနုပညာရှင်များနှင့် မီဒီယာများ အကြား ဆက်ဆံရေးအပေါ် ...
နိုင်ငံရေး လား ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကရော
ပီကာဆို၏ ပန်းချီကားတစ်ကားအပါအ၀င် နာမည်ကျော်တို့၏ အ...
ကဲ မီးလောင်တယ်ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာဈေးရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ
မီးလောင်မှု နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
အနုပညာရှင်များ(Celebrity)၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို မေြး...
လောင်ကုန်ပြီ ဗျို့ လောင်ကုန်ပြီ
အင်တာမှ ထွက်ခွါကာ ရီးယဲလ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု မော...
၁၃ နှစ်အရွယ် တောင်တက်သမား ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်ေ...
မီလီတို၏ သွင်းဂိုးများဖြင့် ချန်ပီယံ လိဂ်တွင် ဗိုလ...
အဖြတ်ရခက်တဲ့ အွန်လိုင်း ကြိုး
ထက်ထက်တို့ရဲ့ ပြဿနာကို စိတ်ဝင်စားရင်
ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ တရားမ၀င်ခိုးယူသုံးစွဲမှုကြောင့် ဒေါ်လ...
ဓမ္မတာ (သမရိုးကျ) မဟုတ်သော လိင်ဆက်ဆံမှုများ နှင့် ဆယ...
တက္ကသိုလ်များတွင် Ipad ချိတ်ဆက်မှုပိတ်ထား
လူသားစားနေသော မြန်မာအဖွားအိုအား ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
စက်ဖြင့်အစစ်ဆေးခံနိုင်သော ဘားကုတ်စနစ်သုံး မြန်မာနိ...
မြဝတီ အနီးမှာ ဗုံးပေါက်ပြန်ပြီ
လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ ရရှိရေး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးထံ မန...
မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်မထပ်ရ
လက်ဖက်အထွက်နည်း၍ ပလောင်လူငယ်များ တရုတ်ပြည်ကူး၍ အလု...
အလုပ်ရှာဖွေသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်သည်များ (အ...
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးက သတင်းထောက်တစ်ဦးအား ကိုယ...
အိမ်ထောင်ဆက် များရခြင်းအကြောင်းကို ထက်ထက်မိုးဦး ထ...
ရေအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသူတို့အတွက် ရုပ်ရှင် အနုပညာရှ...
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်မည့် အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ေ...
မြောက်ကိုရီးယားလုပ်ရပ် တုံ့ပြန်ဖို့ ၀န်ကြီးကလင်တန်...
အို - - - - ဘာတဲ့ !
သမ္မတအိုဘားမားကို လုပ်ကြံရန် သင်ခန်းစာ ဥပမာအတွက် သခ...
Google မှအတုအယောင် antivirus အတွင်းရှိ malware မျာ...
ရေစိုခံ၊ လွတ်ကျခံနိုင်တဲ့ External Hard Disk
ဗလင်စီယာ အသင်း တိုက်စစ်မှုး ဒေးဗစ်ဗီလာ ဘာဆီလိုနာ သိ...
အဓိကရုဏ်းအပြီး ဘန်ကောက်မြို့တည်ငြိမ်ရေး လုံခြုံရေး...
၅နှစ်ပြည့် YouTube နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ ၂ဘီလီယံ...
၀န်ကြီးကလင်တန် အာရှ (၃) နိုင်ငံခရီး ဒီကနေ့စတင်
တတိယနိုင်ငံသွား တောလား (သို့မဟုတ်) တာကျိုး
ကြက်သွန်နီ ဈေးနှုန်းကျ၊ တောင်သူများ အရှုံးပေါ်
မြို့တော် ဘန်ကောက် အပါအဝင် နယ်မြေ ၂၃ ခု တွင် ညမထွက...
မိနစ်၃၀ကြာ တက်ရောက်ဖျော်ဖြေမှုအတွက် ချယ်ရီကိုးလ် စတ...
မိုးဟေကို တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ အမေရိကရှိမြို့ရှ...
အပူလွန်ကဲ၍ မန္တလေးတွင် လူ ၂၃၀ ထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့
Visa On Arrival လျှောက်ထား သူများ အတွက် စည်းမျဉ်း ...
ကွမ်းခြံကုန်း ဓားပြမှု လူ ၂ ဦးသေ၊ ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
အထင်ကရ တက္ကသိုလ်ကြီးများ Gmail အသုံးပြုမှု စွန့်လွှတ်
Office 2010 ကို Microsoft မှ စတင်ဖြန့်ချီ
အိုဘားမား၏ Twitter အကောင့်ထဲ ခိုးဝင်သူ ဖမ်းမိ
မုံရွာတွင် မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်